Siihayaha Wasiirka Caafimaadka “Jaamacadda SIU tallaabo aad u muhiimsan ayay qaaday oo aan horey loo arag” SAWIRRO – Radio Muqdisho
Kun iyo todobo boqol arday oo ka mid ah ardayda dhigata kuliyadaha kala duwan ee Jaamacadda SIU oo maanta u fadhiisatay Imtixaanka sanadlaha ah ee 2014-2015 ayaa waxaa kormeer howleed ku tegay Siihayaha Wasiirka Caafimaadka ee Soomaaliya mudane Cali Maxamed Maxamuud Cali Xareed, isagoo mid mid u booqday fasalada ay ardaydu Imtixaanka ku galayeen.
Sii hayaha Wasiirka Caafimaadka ayaa u jeedada kormeerkiisu ahayd sidii uu ugu kuurgeli lahaa ardayda barata kuliyadda Caafimaadka, agabyada ay ku bartaan tayadooda iyo qeybaha cusub ee Jaamacadda lagu soo kordhiyay, isla markaana uu u dhiri gelin lahaa ardayda dhigata Jaamacadda SIU tayayooda waxbarasho.
Mudane Cali Xareed ayaa mid mid u kormeeray qeybaha ay ku jiraan qalabka ay ardaydu ku bartaan caafimaadka sida meelaha ay yaalaan Meydadku ay ku sameeyaan qeybaha kala duwan ee qaliinka si ay sare ugu qaadaan aqoontooda dhaqtarnimada, isagoo warbixin kooban ka dhageystay maamulada goobaha uu kormeeray.
Hormuudka Jaamacadda SIU Prof Yaxye Cali Ibraahim ayaa sheegay in ay aad ugu faraxsanyihiin booqashada Wasiirka, isla markaana ardayda ay u tahay mid dheeri gelin ah, isagoo ardayda u rajeeyay inay imtixaanka ku guuleystaan.
“Sharaf weyn ayay u tahay Jaamacadda SIU in maanta uu soo booqdo Wasiirka Caafimaadka, runtii waxa uu indhahiisa ku arkay qaabka aan ardayda Imtixaanka uga qaadno, agabyada aan wax ku barno, dhiri gelin bay noo tahay, waxay kaloo dhiiri gelineysaa ardayda dhigata Jaamacadda” ayuu yiri Prof Yaxye.
Siihayaha Wasiirka Caafimaadka Soomaaliya mudane Cali Maxamed Maxamuud Cali Xareed ayaa sheegay in maamulka Jaamacaddu ay ku guulesyteen sidii ardayda dhigata kuliyadda caafimaadka ay qalab casri ah oo dhanka caafimaadka u heli lahaayeen, isagoo ardayda u rajeeyay in ay ku guuleystaan waxbarashadooda ayna ka gaaraan heer wanaagsan, si ay u noqdaan dhaqaatiir wax gal leh oo bulshadooda u adeegta.
“Farxad ayay ii tahay in aan maanta booqasho ku imaado Jaamacadda SIU, runtii waxaan arkay qolalka ay ku jiraan meydadka ee ay ardayda qaliinada ku baranayaan, tani waxa aan dhihi karaa waa tallaabo horumar leh oo ay gaareen Maamulka sare ee Jaamacadda SIU, ma moodeen in Jaamacad sidaan oo kale in ay Xamar ku taallo, way i farxad gelisay runtii” ayuu hadalkiisa ku daray Sii hayaha Wasiirka Caafimaadka.
Jaamacadda SIU oo ka mid ah Jaamacadaha ku yaala Muqdisho ayaa waxa ay noqotay Jaamacaddii ugu horeysay ee ardayda dhigata Kuliyadda Caafimaadka u keenta meydad ay ku sameyaan qaliinada, isla markaaka arday u dirtay Jaamacadda Mekerere ee dalka Uganda si ay hal semester halkaasi ugu soo qaataan tababar dheeri ah.
Siihayaha Wasiirka Gaadiidka oo sheegay in Soomaaliya ay la wareegtay maamulidda hawada "SAWIRRO"